Ugu Weyn Ee Basil
Ma aha oo kaliya kareysa, laakiin sidoo kale faa'iido leh: sifooyinka bogsashada ee basil
Dalal badan, basil ayaa ku dhajiya sifooyinka suugaanta ah, iyada oo tixgelinaya calaamad fiican ee guriga. Ma jiraan wax qariib ah, sababtoo ah dhirta ayaa awood u leh in ay dilaan jeermiska oo daahiriya hawada. Waa maxay isticmaalka basil, habka kiimikada ee dhirta? Faa'iidooyinka basil waxaa lagu qiyaasi karaa qayb ka mid ah dhirta. Caleemooyinkeeda waxaa ku jira fareerka iyo macdanta, saliidaha lagama maarmaanka ah, lepidine, propsoline, saponins iyo glycosides.
Qeybinta basil, waa maxay noocyada dhirta dhirta
Dhirta dhirta oo dhan waxaa lagu yaqaanaa nin, Basil wuxuu leeyahay meel gaar ah. Magaca - Basilicum-ka Ocimum, ama Nooca Royal-wuxuu u hadlaa naftiisa: noocyada kala duwan ee basil waxa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, phytoncides, saponin iyo waxay leeyihiin dhadhan sare iyo tayada qalalan. Ma taqaanaa? Basil caadi ah (Yurub ama Bari) ayaa la beeray muddo ka badan 2500 sano.
Sida loo koro basil on windowsill
Qaar badan oo maanta ah ayaa raadinaya inay abuuraan beerta basbaaska leh ee daaqadaha. Labadaba waa hiwaayad, hal nadiif ah ee jikada, iyo ilaha joogtada ah ee cagaarka cusub ee cuntada. Basil waa wax cajiib ah ujeedadaas, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato in martida dibedda ah ay tahay mid aad u jilicsan. Noocyada Basil ee beerista daaqada daaqadda Guud ahaan, si ay u abaabulaan beer ka soo basil on windowsill, nooc kasta oo noqon doona mid ku habboon, laakiin waxa la doorbidaa in la doorto gaaban iyo la ruxay.
Sida loo qalajiyo basil guriga
Basil waa geedka sanadlaha ah ee loo isticmaalo aduunka oo dhan sida bahalka, mana aha oo keliya qaab cusub, laakiin sidoo kale qalajin. Haa, haa, xitaa marka la qabo qalajinta, waa mid aad uducsan oo caafimaad leh. Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado sida si habboon loo isticmaalo basilaha la qalajiyey. Goorta la soo qaato basil ee qalajinta xilliga jiilaalka Si aad u ilaaliso basilada la qalajiyey intii suurtogal ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato marka lagu talinayo in lagu nadiifiyo qalajinta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Basil 2019